Tuesday December 24, 2019 - 12:26:59 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Kumanaan kun oo qof ayaa dibad baxyo ka dhigaya magaalooyinka waaweyn ee dhulka gummeysiga Itoobiya ku jira ee Soomaaligalbeed.
Dad caraysan ayaa isugusoo baxay fagaarayaasha waaweyn ee magaalooyinka Jigjiga iyo Qabridaharre waxayna kasoo horjeedaan xad gudubyadii lagula kacay masaajidda iyo goobaha ganacsiga Muslimiinta ee gobolka Amxaarada.
Magaalada Qabridaharre ayay dadku goob fagaare ah ku gubeen calanka ismaamulka Amhara waxayna ugu baaqeen dowladda Itoobiya in ay tallaab ka qaaddo kuwii gubay Masaajidda muslimiinta iyo goobaha ganacsiga.
Dhanka magaalada Jigjiga kumanaan kun oo ubadan ardayda waxka barata jaamacadaha iyo Iskuullada ayaa dibad baxyo ballaaran dhigay, culimaa'udiinka Soomaaligalbeed ayaa ku baaqay in gacan laga geysto sidii loo taageeri lahaa muslimiinta lagu dhibaataynayo gobolka Amxaarada.
Dadka iskusoo baxyada dhigaya ayaa ku qeyllinaya Erayo ay ka mid yihiin "Allaahu Akbar Amxaaro dooni Meynno Islaamka Alle ha guuleeyo" iyo Erayo kale oo dhammaantood ay ku cabirayaan shucuurkooda diimeed.
Sidoo kale magaalooyinka Qodeey iyo Shiniile ayaa lagasoo sheegayaa dibad baxyadu ay muslimiintu ugasoo horjeedaan dhibaatada lagu hayo muslimiinta aqaliyadda ku ah gobolka Amxaarada.